पत्रकारको लकडाउन डायरी : कोभिडको त्रासमा परिवारलाई सम्झाएर काम गर्नुको विकल्प छैन | Safal Khabar
पत्रकारको लकडाउन डायरी : कोभिडको त्रासमा परिवारलाई सम्झाएर काम गर्नुको विकल्प छैन
सोमबार, १५ असार २०७७, १३ : ४३
स्याङ्जा । कोरोना भाइरसले विश्वलाई हायलकायल बनाउन थालेपछि जो कसैलाई यसको प्रभावले छुने नै भयो । कुनै विशेष स्थल र घटनामा पत्रकारको पास देखाएर अघिअघि कुद्ने हामी पत्रकारहरु कोभिड –१९ को असरले कसरी गाँज्ने हो भन्ने अन्योलमा शुुरुदेखि नै परेका थियौँ । अत्तालिएर समाचारकर्म छाड्ने कुरा पनि भएन । हामीले त जनतालाई यसविरुद्ध जुध्न सचेतना र सही सूचना समयमा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व बोकेकाले यो जिम्मेवारीबाट हामी मुक्त हुन पनि सक्दैनौँ ।
“पत्रकारितामा समाजप्रतिको जिम्मेवारी र सकारात्मकता” हुनुपर्छ भन्ने लागेर मैले यो बन्दाबन्दीलाई सकारात्मक ऊर्जा भर्ने एउटा अवसरका रुपमा लिई यसबीचमा गाउँगाउँ पुगेर हेर्दा सामान्य लाग्ने तर अरुलाई पनि ऊर्जा थप्न सक्ने खालका विषयवस्तुतर्फ चासो बढाएँ । त्यही गाउँका कुनाकुन्दरामा गरिएका काम मेरो डायरी र कलममा उनिँदै जान थाले । राज्यको समाचार समिति राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा जिल्लाबाट समाचार सङ्कलन गर्नाको अवसर, चुनौती र जोखिम पनि हो भन्ने ठानेर मैले हरेक दिन समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषणको कामलाई बन्दाबन्दीमा विराम लगाइन । मेरो प्राथमिकता, रोजाइ, गाउँको भोगाइ र लेखाइमा डेस्क र मेरो बुझाइ समान नहुन सक्छ तर अधिकांश विषयवस्तुले राससमा स्थान पाइरहे । अनेक अनलाइन र सञ्चारमाध्यमले ती समाचारलाई शीर्षक र आवश्यकतानुसार थपघट गरी स्रोत उल्लेख गरेर र नगरेर पाठकसमक्ष लगिरहे । यस्तो विषम परिस्थितिमा यसरी समाचारको यात्रा अविराम हुँदा आफ्ना व्यक्तिगत समस्या र दुःख पनि एक प्रकारले शान्त हुने रहेछ ।
जिल्लामा जब पहिलोपटक छिमेकी भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका तीन पुरुषमा कोरोना पोजेटिभ देखियो भनेर लेख्नुपर्ने अवस्थामा आइपुग्यो, त्यसपछि हात लर्बरिने स्थिति आयो । बजार र गाउँगाउँमा पुगेर फर्कँदा कतै आफैँलाई त सङ्क्रमण भएको छैन ? मैले घर परिवारलाई त सारिन भन्ने प्रश्न उब्जिन्थ्यो तर पनि मनलाई बलियो बनाएँ । परिवारलाई पनि पत्रकारिता पेशाबारेको जिम्मेवारी बताएर सम्झाएँ ।
आफ्नै जिल्लामा भारतबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमणको पुष्टि भएपछि परिवारमा चिन्ता यसरी बढेको थियो कि मैले सम्झाएर मात्रै पुग्ने स्थिति थिएन, सम्झाउनाको विकल्प पनि थिएन । मनभित्र त्रास भए पनि परिवारलाई केही हुन्न भनेर सम्झाउन छाडिन । म परिवारलाई सकेसम्म सम्झाउने कोशिश गर्थेँ । श्रीमती भन्थिन्, “घरमै बसेर काम गरे हुन्न र ? यस्तो अवस्थामा बाहिर नजानू ।” म भन्थेँ, “यसरी आत्तिनु पर्दैन । मैले सावधानी अपनाएको छु ।” हरेक दिनजसो यसरी नै सम्झाउँदै म आफ्नो काममा निस्कने गरेको छु । म घरबाट निस्किएसंँगै सानी छोरीको “बाबा छिटो घर आउनू” भन्ने तारन्तारको फोनले एउटा पत्रकारको परिवारलाई कतिसम्म असर परेको छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
जिल्लाका स्थानीय तह र प्रशासनलगायतसँग गर्नुपर्ने छुट्टाछुट्टै समन्यव र स्थलमा हिँड्नु पर्दा घरपरिवारमा सिर्जना हुने त्रासले केही समस्या भए पनि सूचनालाई निरन्तर रुपमा प्रवाह गर्ने कार्यमा मैले कुनै पनि कमी आएको दिएको छैन । स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति सतर्क रहँदै सञ्चारमाध्यमबाट अरुलाई पनि सचेत बनाउने अभियान चलिरहेकै छ र चलिरहने छ । (रासस)
#लकडाउन डायरी #कोरोना भाइरस #कोभिड–१९
चितवनका नेता कार्यकर्ताले मेरो नेतृत्व खोजिरहनुभएको छ : रामप्रसाद न्यौपाने
अन्योलको भुँमरीमा एमसीसी परियोजना